Akhriso: Guddiyada Doorashada Dadban ee Maamul Goboleedyada Qaar oo La Magacaabay – Goobjoog News
Waxaa saacadihii tagay la magacaabay guddiyo kala duwan oo dowlad goboleedyada ay u xil saareen qabashada doorashooyinka dadban ee qaran ee ka dhacaya maamul goboleedyada.
Ilaa hadda waxaa si rasmi ah loogu dhawaaqay guddiyada doorasho ee Galmudug, Koonfur galbeed iyo Somaliland.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa ku dhawaaqay xubnaha guddiga doorashada heer federaal ku maamulka Galmudug doorashada soo aadan, xubnaha ayaana ka kooban 8 xubnood , waxaana ku jira laba haween ah.
Sidoo kale madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Laftagareeen ayaa ku dhawaaqay xubnaha guddigaas ku matali guddiga doorashada heer federaal sida lagu ballamay heshiiskii kusoo idlaaday Muqdisho, waxaana uu soo magacaabay 8 xubnood waxaana ku jira laba haween ah.
Dhanka kale raiisalwasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa ku dhawaaqay guddiga maamulaya doorashada xildhibannada Somaliland kasoo galayo dowladda federaalka, waxaana ay ka kooban yihiin 11 xubnood, kuwaas oo maamulayo doorashada labada aqal ee Somaliland ee Muqdisho lagu qabanayo.
Khadar Ciise Xuseen
Sundus Ibraahim Cali
Maxamed Cabdullahi Jirde
Cabdiraxmaan Cusmaan Aadan
Samsam Maxamed Faarax
Najiib Xuseen Samaale
Kahadar Cabdullahi Aden
Ifraax Cumar Ducaale
Umeyma Cabdullahi Ciise
Maamullada Jubbaland iyo Puntland ayaa weli ku dhowaaqin xubanaha guddiyada heer federaal ee doorashooyinka qaranka ee ka dhicidoona maamulladaas sida lagu ballamay heshiiskii ay wada gaareen Farmaajo iyo maamullada dalka.